‘सरकार विस्तार भयो भने दल फुट्ने हो की भन्ने अवस्था आइसक्यो’
September 6, 2021 N88LeaveaComment on ‘सरकार विस्तार भयो भने दल फुट्ने हो की भन्ने अवस्था आइसक्यो’
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट गठन भएको सरकारले केहि काम गर्न नसकेको बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा संघले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बौल्दै नेम्वाङले सरकारले बिजनेस नदिँदा संसद कामविहिन भएको बताएका हुन्। उनले भने, ‘सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ। यो सरकारले संसदलाई बिजनेस दिएन।’ नेम्वाङले संसद्ले काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको […]
काठमाडाैं उपत्यकाका विद्यालय भाैतिक उपस्थिति मै खुल्ने !
September 6, 2021 N88LeaveaComment on काठमाडाैं उपत्यकाका विद्यालय भाैतिक उपस्थिति मै खुल्ने !
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा आगामी असोज १ गतेदेखि विद्यालय खुल्ने भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहहरूबीच भएको बैठकले असोज १ गतेदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले स्थानीय तहहरूले अभिभावक र शिक्षकसँग छलफल गरेर कोरोनाको अवस्था मूल्यांकन गरी असोज १ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरेका छ । […]
अधिकांश राष्ट्र’घा’ती सम्झाैता कांग्रेस सरकारका पालामा हेर्नुस् यी हुन् राष्ट्र’घा’ती नेताहरू
September 6, 2021 N88LeaveaComment on अधिकांश राष्ट्र’घा’ती सम्झाैता कांग्रेस सरकारका पालामा हेर्नुस् यी हुन् राष्ट्र’घा’ती नेताहरू
एमसीसी पास गर्ने तयारीमा सरकार, देशभर कडा सुरक्षा !
September 6, 2021 September 6, 2021 N88LeaveaComment on एमसीसी पास गर्ने तयारीमा सरकार, देशभर कडा सुरक्षा !
काठमाडौँ । सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) जसरी पनि अनुमोदन गराउने रणनीतिमा भएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ । एमसीसी पास गराउने प्रक्रिया अघि बढाउँदा देशभर आन्दोलन चर्किने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सरकारले चारवटै सुरक्षा निकायलाइ हाइ अलर्ट गराएको हो । यो महिनाभरी नै सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन निर्देशन गरिएको छ । एमसीसीको […]
September 6, 2021 N88LeaveaComment on यी ४ राशि हुने व्यक्तिको कुण्डलीमा हुन्छ धनी बन्ने योग, गर्छन निकै कडा मेहनत
एजेन्सी । सौर्यमण्डलमा रहेका ताराहरू र ग्रहहरूको आपसी सम्बन्धबाट प्राप्त हुने किरण वा तरंगलाई सुक्ष्म गणितीय सूत्रबाट अध्ययन गरेर त्यसको यस पृथ्वीमा विद्यमान जड र चेतनमाथि पर्ने प्रभावको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने शास्त्रलाई ज्योतिषशास्त्र हो। ज्योतिषी भाषा अनुसार तपाईमा गृह, नक्षत्रको प्रभाव के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। कुनै पनि व्यक्ति कस्तो होला […]
दाङमा कुखुराको भाले मरेपछि मालिकले गरे काजक्रिया, पुरै गाउँले नै गए मलामी
September 6, 2021 N88LeaveaComment on दाङमा कुखुराको भाले मरेपछि मालिकले गरे काजक्रिया, पुरै गाउँले नै गए मलामी
काठमाडौं । सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ कुखुराको भालेको पनि काजक्रिया गरियो भनेर । तर नेपालकै दाङमा एउटा कुखुराको भाले मरेपछि काजक्रिया गरिएको छ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका पहरुवाका शिव सुवेदीले झण्डै २० वर्षदेखि पाल्दै आएको कुखुराको भाले मरेपछि दाहसंस्कार गरिएको छ । आफूले १९ वर्ष १० महिनासम्म पालेको भाले मरेपछि सुवेदीले हिन्दु परम्पराअनुसार दाहसंस्कार गरेका […]
एमालेमा फर्किने रामकुमारी झाँक्रीको चाहना, नेकपा (एकीकृत समावादी) विघटन गर्ने घोषणा !
September 6, 2021 N88LeaveaComment on एमालेमा फर्किने रामकुमारी झाँक्रीको चाहना, नेकपा (एकीकृत समावादी) विघटन गर्ने घोषणा !
काठमाडौं । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा एमालेमा फर्किने इच्छा व्यक्त गरेकी छन् । एमाले फुटाएर नयाँ पार्टी घोषणा गरेको महिना दिन नवित्दै झाँक्रीले एमालेमा फर्किने इच्छा देखाएकी हुन् । त्यसका लागि वातावरण बनाउन उनले माधव नेपालको साथ छाडेर एमालेमै रहेका मध्यमार्गी नेताहरुलाई आग्रह गरिन् । ‘हाम्रा केही मित्रहरु […]
एमसीसीबारे सरकारले लियो नसोचेको निर्णय, प्रचण्ड र माधवको समेत सहमति
September 6, 2021 N88LeaveaComment on एमसीसीबारे सरकारले लियो नसोचेको निर्णय, प्रचण्ड र माधवको समेत सहमति
काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्बाट अनुमोदन गराउने तयारी थालेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका नेता प्रचण्ड र माधव नेपालको सहमतिमै एमसीसी अगाडि बढ्ने भएको हो । यसका लागि आवश्यक तयारी थालिएको छ । गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई ‘हाई अलर्ट’ मा रहन निर्देशन दिएको छ । संसद्मा एमसिसी अनुमोदनका लागि पेस […]
अर्थमन्त्री जना’र्दन शर्माले अभिभावकत्व लिएकी बालिका गर्भवती, वडाध्यक्षका छोरा’वि’रु’द्ध उ’जु’री
September 6, 2021 N88LeaveaComment on अर्थमन्त्री जना’र्दन शर्माले अभिभावकत्व लिएकी बालिका गर्भवती, वडाध्यक्षका छोरा’वि’रु’द्ध उ’जु’री
सुर्खेत । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका– १० का वडाअध्यक्ष गंगाराम चनाराका छोरा कुश्माखर चनाराले ब’ला’त्का’र गरेको भन्दै १५ वर्षीया बालिकाले प्रहरीमा उ’जु’री दिएकी छन् । इलाका प्र’ह’री कार्यालय आठबीसकोट रुकुम पश्चिमका प्र’ह’री निरीक्षक कपिल शाहीका अनुसार बालगृहमा बस्दै आएकी बालिकाले आइतबार प्र’ह’री’मा उ’जु’री दिएकी हुन् । उजुरीमा बालिकाले कुश्माखरका बुवा गंगाराम र आमा सुनिता चनारावि’रु’द्ध […]